Ikusasa Levidiyo Yeselula Nosesho Lapha! | Martech Zone
Lokhu kuyamangaza ngokumangazayo futhi kungukushintsha umdlalo kwemakethe yeselula. Layar wethule eNetherlands. UDuke Long ungithumele isixhumanisi salobu buchwepheshe obusha… uLayar ububiza ngesiphequluli esingokoqobo esingathandwa ngumakhalekhukhwini. Ngikubiza ngekusasa!
I-Layar isicelo samahhala efonini yakho ephathekayo esibonisa okukuzungezile ngokubonisa imininingwane yangempela yesikhathi sedijithali ngaphezulu kweqiniso ngekhamera yefoni yakho ephathekayo.
I-Layar iyatholakala kwi-T-Mobile G1, i-HTC Magic nezinye Android izingcingo phakathi I-Android Market kweNetherlands. Amanye amazwe azongezwa kamuva. Izinsuku zokukhishwa okuhlelwe kwamanye amazwe azikaziwa okwamanje.
Uma ungayiboni ividiyo kulokhu okuthunyelwe, qiniseka ukuthi uchofoze ukuze ubone eyokuqala iselula engokoqobo ukungathandwa kwabathelisi esikubona! Ingqondo yami igijimela amathuba amahle obuchwepheshe obufana nalobu!
Tags: androidUkungathandwa kwabathelisi esikubonag1htc umlingoovamileUkumakethwa Kwamaselula Nethebulethit-mobilet-mobile g-1
Ingabe Yonke Mayelana Nekhodi Esebenzisekayo? er… Okuqukethwe
Jul 16, 2009 ku-12: 42 AM
Ucezu olumangalisayo lwesoftware. Noma yimuphi umbono wokuthi bakwenza kanjani?
Jul 16, 2009 ku-1: 29 AM
Kubukeka sengathi inhlanganisela ye-GPS nevidiyo, u-Adam. Ngempela kuyamangalisa. Cabanga lokhu ngokukhiqizwa komkhiqizo nobuso. Esikhundleni sokukhohlwa amagama abantu, ngingavele ngibakhombe incwadi yami yamakheli!
Kuyisiboniso esihle kakhulu - kepha silapha njengakwilabhu ethile endaweni ethile.
Ngibona kalula ukuthi lokhu kwenziwa ku-iPhone. Lowo mtshina we-azimuth abawufake lapho neKhamera ne-GPS uzokwenzela ezinye izinhlelo zokusebenza ezimangazayo i-methinks.